प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको खामबन्दी जवाफ (पूर्ण पाठसहित) - || युथ फ्रंटलाइन ||
२०७७ मंसिर १३, शनिबार १६:०५:००
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा शनिबार खामबन्दीप्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
अर्का अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्तावका नाममा १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र प्रस्तुत गरेपछि मंसिर ३ गते सचिवालय बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अर्का अध्यक्षले लगाएका आरोपहरुको बुँदाबुँदामा जवाफ दिनका लागि समय चाहिएको भन्दै स्थगित गरेको बैठक आज बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि दाहाललगायतले लगाएको आरोपको जवाफ समेटेर तयार गरेको लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठक १६ गते पुनः बस्ने गरी सम्पन्न भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ खामबन्द गरेर दिएको पार्टी प्रवक्ताएवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
“प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव खाममा राखिएकाले अध्ययन गर्न पाइएको छैन। त्यो प्रस्ताव अध्ययन गरेर मंसिर १६ गते फेरी बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको छ,” श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने।
“यहाँ उपस्थित नेतामध्ये कसैले तीन दशक भन्दा लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका छौं, कसैले डेढ दशक त कसैले दुई दशक लामो समय नेतृत्व गरेर बिताएका छौं,” ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, “यसबीचमा परिवार, आफन्त, नातेदार सबैलाई सबै कुरा पुग्ने गरी व्यस्थापन पनि गरि सक्यौं, अब त जनताका लागि, देशका लागि छलफल गरौं न।”
अध्यक्ष ओलीविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै १९ पृष्ठ लामो ‘आरोप पत्र’ पेश गरेपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सो धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली आगमी बैठकहरूमा कोभिड महामारी नियन्त्रण, सुशासनसहित विकास र समृद्धीको विकासका बारेमा छलफल गर्नसके मात्रै राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने पनि बताएका छन्।
“कोभिड कसरी नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, स्थिरता र विकास कसरी गर्ने, जनताको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउने? यस विषयमा छलफल गरौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आफ्ना लागि, मैले पाइनँ, मेरो भाग खोई? भन्ने विषयमा मात्रै छलफल गरेर कति तमासा देखाउनु? बरु ती बिषय छाडेर विकास र समृद्धिका बारेमा छलफल गर्न सकेमा मात्रै राष्ट्रले बैठकबाट लाभ लिन सक्छ।”
गरिब राष्ट्रबाट विकासित मुलुक बनाउने अजेन्डामा आगमी बैठकहरु केन्द्रित हुने अपेक्षा आफुले गरेकोसमेत ओलीले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेका प्रस्तावको पूर्ण पाठ यहाँ दिइएको छ:
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी हटाएर प्रदीप ज्ञवाली, थपिएका केन्द...